အသားကျောင်းများတွင်ပိတ်ပင်ခဲ့? | Apg29
962 online! | Sidvisningar idag: 171 305 | Igår: 156 273 |
အသားကျောင်းများတွင်ပိတ်ပင်ခဲ့?ရုပ်ပုံ: alltomstockholm.se ။ အင်္ဂလန်မှာလုံးဝနီးပါးအားလုံးကျောင်းများတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုဝတ်ပြုကြလော့။ ဒီအားလုံးကျောင်းကအစာလုံးဝ nonflesh ဖြစ်သင့်ကြောင်း "Meatless တနင်္လာနေ့" လိုအပ်ပေမယ့်။ အဆိုပါသက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုကျောင်းများတွင်မြင့်တက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခရိုင်ရဲ့ကျောင်းသားအများစုဟာပြီးသားကိုအနည်းဆုံးတနေ့တစ်ပါတ်နေသားတကျ nonflesh ဖြစ်လာရှိသည် - နှင့်Södermalm၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကောလိပ်မှာမရှိတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ သို့သော်ထိုအဖွဲ့အစည်းကို "Meatless တနင်္လာနေ့" နိုင်ငံရေးသမားတွေသီးသန့်သက်သတ်လွတ်အစားအစာကိုအစေခံရန်ကျောင်းများ, မြူနီစီပယ်နှင့်ခရိုင်ကောင်စီနှစ်ခုစလုံးအတင်းချင်တယ်။သင်တို့သည်ငါတို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာအလုပ်မှာတပ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုယနေ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကန့်ကပြောပါတယ် နတ်ဆိုးတို့၏အယူဝါဒ ဘုရားသခင့နေသူများကဖန်တီးသောအစားအစာများ (: 1-3 1 တိမောသေ 4) မှရှောင်ကြဉ်ဖို့လူပညတ်ထား။ကမျြးစာကိုအသားစားသုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မိန့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးနောက်, ဘုရားသခငျသညျလူစားရန်အသားတို့အားပေးလေ၏။1 ထွ 9: 33 သည်အသက်ရှင်သောရွေ့လျားအရာသင်တို့စားစရာဘို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုငါသည်သင်တို့ကိုဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုပေးအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေးထားပါတယ်။ ထို့နောက်အသားကိုစားရ။သငျသညျသငျavgudaköttကြောင့်မစားကြပါလျှင်အသားရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ (ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်) သင့်အသားစားအမှုပေါ်တွင်သင်၏အစ်ကိုရှိပါ့, ထို့နောက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုသည်နှင့်အညီ, avgudaköttမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ ကျွန်တော်တို့အသားကိုစားရန်သူမည်သူမဆိုဟုတ်လျှင်, နတ်ဆိုးတို့၏အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ 1 တိမောသေ 4: 1-5ဝိညာဉ်တော်သည်ကိုရှင်းလင်းစွာနောင်ကာလအတွက်အချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်နတ်ဆိုးတို့၏မာရ်နတ်နံဝိညာဉ်နှင့်အယူဝါဒအတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ 1 သို့သော်ခွေုံမုသာဝါဒီများကလှည့်ဖြား2သူတို့၏စိတ်ရှေ့၌တတ်သော။3ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျ ယုံကြည်. သမ္မာတရားကိုသိသောသူတို့၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွလက်ခံရရှိခံရဖို့ကဖန်တီးသောအစားအစာကိုရှောင်ဖို့သူတို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အမိန့်လူတွေကိုမြစ်တား။ ဘုရားသခင့နေသူများကဖန်တီး4အရာအားလုံးသည်ကောင်းနှင့်ဘာမျှမကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွလက်ခံရရှိလျှင်ပယ်ချခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။5ဘုရားသခင်နှင့်ဆုတောင်းပဌနာ၏စကားအားဖြင့်သန့်ရှင်းစေသည်။ကျနော်တို့လုပ်ဖို့နတ်ဆိုးနှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိသည်မဟုတ်မည်!ဒီနေရာမှာငါအသားကိုစားခြင်းမှကြွလာသောသူအချို့ကျမ်းစာ၌စာရင်းပြုစု။ အဲဒီမှာပိုပြီးကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမဲ့အဲဒီကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရကြောင်းရှင်းလင်းစွာသရုပျဖျော!သမ်မာကမျြးအခနျးငယျအသားကိုစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်.1 ကမ္ဘာဦးကျမ်း 9:4- သို့သော်ကိုယ်တိုင်က၎င်း၏အသက်ဝိညာဉ်ရှိကြောင်းအသားကိုအမည်ရမိမိအသွေး, သငျသညျ, မစားရကြလိမ့်မည်ထှကျမွောကျရာ 16: 8 - ထိုအခါမောရှေသည်ဆက်လက်: "သခင်ဘုရားအပျေါ၌စားသောက်ရန်စားရန်ညဦးအသားနှင့်နံနက်သည်မုန့်၌သငျပေးတော်မူ၏, ထာဝရဘုရားသည်သင့်အားသူ့ကိုအပြစ်တင်လျက်မြည်တမ်းပုံကိုကြားသိခဲ့သည်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြသည်သင့်ငြင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပေမယ့်သခင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ ။ "2 ထှကျမွောကျရာ 16:12 - "ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၏တီးတိုးကြားရကြပြီသူတို့ကိုပြောပြပါ။ မိုဃ်းမလင်းမှီသင်တို့သည်မှာအသားကိုစားရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, နံနက်မုန့်တွင်စားသောက်ရန်ထိုအခါသင်သည်ငါထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်။ ။ "2 ကမ်ဘာဦး 29:32 - ရမ်အသားနှင့်အာရုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတံခါးဝ၌စားတောင်းသောမုန့်။4 ထှကျမွောကျရာ 11:18 - ကိုလူအားဆင့်ဆိုရမည်မှာမနက်ဖြန်အဘို့ကိုယ်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းစေနှင့်သင်တို့အသားကိုစားရကြမည်။ သင်သည်အဘယ်သူစားရန်အမဲသားကျွန်တော်တို့ကိုပေးရကြမည်ဟူမူကား, ထာဝရဘုရားအားအျောဟစျပါ၏? အဲဂုတ္တုပြည်၌, ကျနော်တို့ကဒါကောင်းသောရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ဖြစ်. ထာဝရဘုရား၏အသငျသညျအစာကိုစားရန်အမဲသားကိုပေးတော်မူမည်။4 ထှကျမွောကျရာ 11:21 - ထိုအခါမောရှေသည်ဟုဆိုသည်: "ခြောက်လတရာတထောင်ခြေသည်သူရဲ, ငါဝန်းကျင်ရှိသည်, သငျသညျသူတို့ကိုငါတစ်လစားရန်အမဲသားကိုပေးတော်မူမည် '' ဟုပြော!5 ထှကျမွောကျရာ 12:15 - သို့သော်, သင်သည်သင်၏ဘုရားသခငျသညျပေးသည်သခင်ဘုရားကကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အညီ, အဖြစ်အများကြီးသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်တို့မြို့များအတွက်ချင်တယ်အဖြစ်အသားသတ်စားလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သမင်ဒရယ်သို့မဟုတ်သမင်၏အသားဖြစ်လျှင်အဖြစ်မစင်ကြယ်သောသူတို့သည်နှစ်ဦးစလုံးသည်စားရကြမည်။5 ထှကျမွောကျရာ 12:20 သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရမှဆန္ဒရှိသည်ကြောင့်, သငျသညျအဖြစ်တာအမဲသားကိုစားရကြမည် "ငါအမဲသားကိုစားချင်တယ်" သူသည်သင်တို့ဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်းသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်၏နယ်မြေကျယ်စေတော်မူပြီ, သင်ဒီတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ - သငျသညျချင်တယ်။5 ထှကျမွောကျရာ 12:22 - ဒါပေမဲ့သင်သမင်ဒရယ်သို့မဟုတ်သမင်၏အသားကိုစားသကဲ့သို့သင်တို့ကိုစားရကြမည်။ ထိုမစင်ကြယ်သောသူတို့သည်နှစ်ဦးစလုံး၏စားရကြမည်။5 ထှကျမွောကျရာ 15:22 - သင်၏တံခါးခုနှစ်တွင်သင်စားရလိမ့်မည်။ သင်သမင်ဒရယ်သို့မဟုတ်သမင်၏အသားကိုစားသောကြောင့်ထိုမစင်ကြယ်သောသူတို့သည်နှစ်ဦးစလုံးသည်စားရကြမည်။1 ဓမ္မရာဇဝင် 17:6- ကျီးညဦးယံ၌နံနက်ယံနှင့်မုန့်နှင့်အသားထဲမှာသူ့ကိုမုန့်နှင့်အသားဆောင် ခဲ့. , သူခြောငျးမှသောက်၏။1 ဓမ္မရာဇဝင် 19:21 - ထိုအခါဧလိရှဲကသူ့ကိုစွန်ပြန် သွား. မိမိအနှားနှစျကို ယူ. သူတို့ကိုသတ်နှင့်နွားနှင့်အတူထိုသူတို့၏အသားပြုတ်။ ဤသူကိုလူအားပေး၏, သူတို့သည်စားကြ၏။ ထိုအခါသူသည်ထဧလိယသည်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်သူ့ကြှနျဖွစျလေ၏။15:20 တမန်တော် - ဒါပေမယ့်သာညှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏အသားကနေနှင့်အသွေး မှစ. , မတရားသောမေထုန်မှ, ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့်မစင်ကြယ်သောဖြစ်လာကြပြီအမှုအရာမှပယ်ရှားစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုရန်ရေးပါ။15:29 တမန်တော် သငျသညျအသှေးကိုမှ, လည်ပင်းညှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏အသားနှင့်မတရားသောမေထုန်မှ, ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ကွာအသားကနေစောင့်ရှောက်သော - ။ သင်ကိုရှောင်ကြဉ်လျှင်သင်ျာဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးကောင်းသော! "21:25 Acts , သွေး မှစ. , ရုပ်တုလည်ပင်းညှစ်တိရစ္ဆာန်များနှင့်မတရားသောမေထုန်၏အသားကိုယဇ်ပူဇော်ရာဒါပေမယ့်ယုံကြည်ဖို့လာသူကိုတပါးအမျိုးသားတို့အဘို့အဖြစ်ကျနော်တို့ရေးထားပြီနဲ့သှားကွအသားနေသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ "-ရောမမြို့ 14:21 - ဒါဟာအသားကိုစားသို့မဟုတ်စပျစ်ရည်ကိုမသောက်ရသို့မဟုတ်သင်၏အစ်ကိုပြစ်မှုယူကြောင်းအရာအားလုံးထက်လုပ်ဖို့မ သာ. ကောင်း၏။1 ကောရိန်သု 8: 1 - ကရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကိုမှကြွလာသည့်အခါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပညာအတတ်ကိုအပိုင်သိရကြ၏။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်ဆောက်စဉ်သို့သော်အသိပညာ, ကျွန်တော်တို့ကိုဖောင်းကိုမှန်ကန်စေသည်။1 ကောရိန်သု 8:4- ထိုအခါသင်ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်အသားကိုစားရန်ခွင့်ပြုထားပါကမေးခွန်းမှကြွလာသောအခါ, ကျနော်တို့မရှိသရုပ်တုကိုကမ္ဘာ့အကြောင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းသာဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကိုငါသိ၏။1 ကောရိန္သု 8:13 - သို့ဖြစ်. ထို: အစာအာဟာရကိုအကြှနျုပျညီအစျကို၏ဖြစ်ရပ်မှရရှိသွားတဲ့လျှင်, ငါသည်အသားကိုစားရမှဘယ်တော့မှရည်ရွယ်, ဒါကြောင့်ငါသည်ငါ့အစ်ကိုရဲ့အမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လာကြပါဘူး။ ? 2:14 Up ကို - သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့တဘက်၌တစ်ခုခုရှိသည်: သငျသညျသူတို့အမှုအရာသည်ရုပ်တုတို့အားယဇ် ပူဇော်. သစ္စာမဲ့ခဲ့စားနိုင်အောင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဘို့အထောင်ချောက်သတ်မှတ်ထားဖို့ဗာလက်မင်းကိုအကြံပေးသောသူတည်းဟူသောဗာလမ်၏ဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့စွဲကိုင်သောသူအချို့ရှိရှိသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း 2: 20- သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ဆီသို့တစ်ချက်ရှိသည်: သငျသညျထိုမိနျးမယေဇဗေလသည်းခံကြောင်း, သူမအဘယ်သူသင်ပေးဖို့, ပရောဖကျမကိုယ်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်သစ္စာရှိသောသူဖြစ်ငါ၏ကျွန်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းရန်နှင့်ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်ကောင်ကိုစားရန်။source:စတော့ဟုမ်းသက်သတ်လွတ် Capital ကိုလုပ်ပါ့ | စီးတီးဟာဘဝ | အားလုံးစတော့ဟုမ်းအကြောင်း
960 online! | Sidvisningar idag: 171 306 | Igår: 156 273 |